Sonke athande yamahlaya lethu ncwadi heroes kakhulu. Eminyakeni edlule, our heroes have jumped out of our comic books into films, amavidiyo kanye isiqophi imidlalo. Izwe Slots online yokudlala akufanele kwesokunxele aphume kulesi kwethonya yamahlaya book heroes. Ngenxa yalokho, Nyx DC Comics isungule Green Lantern Slots game behlonipha omunye odumile ncwadi yamahlaya hero DC sika ngegama elifanayo.
Mayelana unjiniyela Green Lantern Slots
Nyx DC Comics yinkampani umzali for the developer popular — NextGen. It uye wadala eningi imidlalo yamahlaya-based kuyo yonke le minyaka phakathi kwawo slot samanje kwenzeka ukuba omunye wabantu Engcono Slot Bonus Site.
Green Lantern kuba Khipha ku-internet Slot Bonus Imigomo Oziqhayisayo reels ezinhlanu, imigqa emine kanti ingqikithi yabangamashumi amahlanu paylines ozikhethela. Uma unomuzwa wokuthi inhlanhla yakho isesikhathini, wena at inkululeko ukunciphisa isibalo paylines abakhuthele Khipha ku-internet Slot Bonus game Site.
I design yaleli mdlalo ungomunye ukuthi kwakuyoba kukukhumbuza yamahlaya-book imiklamo. Isimo impi ngemuva yileyo qiniseka ukuthi ugcina umbhalo adrenaline yakho njalo ngezimoto adventure more and fun.
The zasendle kule game is a close up Ngenxa yokuthi tyena Green Lantern in action. I chitha yiyona indandatho unika hero amandla ethu sakhe esikhethekile. I zasendle livela kuphela kwi reels the slot game lesibili nelesine futhi kabili inhlanganisela yakho.
Izici ibhonasi kule game izici Bonus Bet kanye Ring Izici. The Bonus Bet feature is used to activate the ring features and it has its own special addition to your reward. Isici ring kuholela up to belwa hero yethu futhi Nemesis wakhe - Sinestro. Ukunqoba i-lantern kuyophumela ibhonasi elikhulu kuwe ngenkathi ukuhlulwa kwakhe kwakuzosho imivuzo encane ukuba wena.
You will find the slot having a sufficiently decent gameplay, nge esimaphakathi on the fun-factor abathintekayo kodwa nakanjani ikugcine izinzwane zakho.